Soo Saaraha Daaqadda Daaqada Ugu Wanaagsan Iyo Warshad | Medo
MEDO waxay bixisaa nidaamyo badan oo daaqada daaqada aluminium ah, oo ay ka mid yihiin: daaqada maqalka ee 'outsiwng window', daaqada shiraaqada, daaqada / hopper window, daaqada daaqada jihada, daaqada iyo janjeerka, daaqada go'an, daaqada sawirka, daaqada dhinaca sudhan, daaqada derbiga daah iwm.
Noocyada gacanta iyo mootada labadaba waa la heli karaa. Birta ahama iyo mesh dhoobada qarsoon ayaa la heli karaa si loo daboolo baahiyaha macaamiisha kala duwan. Maxaa intaa ka sii badan, MEDO waxay bixisaa naqshado daaqad gaar ah si ay kaaga soocdo dadka kale, tusaale ahaan, daaqad jiingad laba jibbaaran, 3 daaqad 1 ah, daaqad weyn oo is barbar socda iwm.
Habka daaqada u furan
Habka furan albaabka
• Xasilooni sarreysa • Karti sarreysa • Muuqaalad sarreysa • Hantidhowr hooseeya • Helitaanka Qiimo Dheeraad ah oo Bilaash ah • Kharashka Dayactirka oo Hooseeya
Nasashada kuleylka, naqshadeynta godad fara badan, dheecaanno qarsoon
Meelo fara badan
Kuleylka kuleylka ee aadka u fiican oo leh astaanta nasashada kuleylka, xariijinta kala-goysyada kuleylka badan, iyo muraayadaha qafiifka ah. Saameyn hoose oo aan lahayn cadaadis socodka socodka lacagta oo leh astaamo aad u kala duwan. Badeecadaha kaladuwan ee kaladuwan ayaa awood u siinaya dhammaan aagagga iyo dhacdooyinka si ay u helaan alaabteeda ugu habboon si ay ula kulmaan baahiyo kala duwan oo ku saabsan qaabka iyo shaqada. Waxyaalaha cusub sida daaqada-albaabka iyo daaqada laba jibbaarka iwm waxay ka badnaan kartaa rajadaada si aad u daboosho baahidaada oo aadan xitaa ogaan karin, sidaasna ay ku hogaamineyso isbedelka suuqa.
farsamada lnjection, waxqabadka xiritaanka sare
Cirridka koodhka cirbadda
Ciriiri hawo sare
Cidhiidhi biyo ah
Taxane buuxa codsan geedi socodka duritaanka xabagta si loo gaaro xoog wadajir wadajir ah. Qalabaynta isku xidhka mullion-ka badan iyo dheecaanka qarsoon ayaa inta badan hagaajiyay cidhiidhiga biyaha. Waxaa intaa sii dheer, shaashadda 'EPDM-ka' premium waxay kor u qaadday cidhiidhiga hawada iyo cidhiidhiga biyaha.
Ilaaliyaha geeska hal abuurka leh, birta birta ah ee birta birta ah ee birta birta ah
Gaaritaanka bilaa xanibaada
Ilaaliyaha geeska hal abuurka ah
Albaabka qaybta hoose ee albaabka aan xannibnayn wuxuu bixiyaa caqabad-la'aan marin. Dareeraha birta aan xarka lahayn iyo duufaanta qarsoon ee translucent ayaa la heli karaa si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee shaqada mesh mesh iyo aragtida. Ilaaliyaha geeska hal abuurka ah ee daaqada daaqista ma bixinayo oo kaliya naqshad qurux badan laakiin sidoo kale badbaado dheeri ah si looga fogaado geeska fiiqan.
Muuqaalka laba-midab ah, oo macnaheedu yahay astaanta gudaha iyo muuqaalka kore ee midabyo la'aan, ayaa si fiican u la mid noqon kara naqshadda gudaha iyo aragtida dhismaha. Qodobka qufulka adkaysi u leh iyo ilaaliyaha ayaa bixiya feejignaan dheeri ah waxayna sare u qaadaan waxqabadka iska caabbinta culeyska dabaysha ee ka fiican cidhiidhiga hawada iyo ciriiriga biyaha. waxay bixisaa khibrad nololeed oo raaxo leh oo leh muuqaal yar, khadad siman, iyo hawlgal aamusnaan ah.Users waxay ku nasan karaan amniga windows xitaa cimilada aadka u xun ee leh aalad aaminka ah
Qaab dhismeedka alaabta
MDPC100A Daaqada banaanka
MDPC100A110 daaqada banaanka
(xarkaha jirku isku toosan yahay + xayndaabka la ilaalin karo)
MDPC100A120 daaqada banaanka
Naqshadaynta patenti, mortise iyo teknoolojiyada tenon, waxay mareen dheecaanno qarsoon
Mortise iyo tenon tech
Kuleylka kuleylka ee aadka u fiican oo leh astaanta nasashada kuleylka, xariijinta kala-goysyada kuleylka badan, iyo muraayadaha qafiifka ah. Naqshadaynta qaabdhismeedka asalka ah, kanaalka dheecaanka lagu dhisay, cidhiidhiga biyaha. Cidhiidhiga biyaha iyo iska caabbinta dabaysha ayaa lagu hagaajiyaa mullion iyo xarig ku xiran molion. Multistep shaabadaysan oo saddex lakab ah iyo qaab dhismeedka dheecaanka qarsoon ee cidhiidhiga biyaha oo fiican.
Xayndaabka amniga ee furan, 45 ° dhalada isku dhafan ee isku dhafan
Xayndaabka amniga ee furan
45 ° kuusha dhalada isku dhafan
Qaabka beddelaadda ee ka-gogolka ah wuxuu si guud u hagaajiyaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka. Xayndaabka furan ee furan ma aha oo kaliya sugidda amniga laakiin sidoo kale waxay fududeyneysaa baxsashada haddii ay jirto xaalad degdeg ah. Duubka iswaafajsan iyo qaabka leh 45 ° wadajirka geeska wuxuu siiyaa muuqaal quruxsan oo qurux badan.
Ilaaliyaha geeska hal abuurka ah, tikniyoolajiyada cirbadaha cirifka, tiirka geeska cusub
Tikniyoolajiyadda cirbadaha xabagta
Tiirka geeska cusub
Xayawaanno isku dhafan oo loo yaqaan 'EPDM gasket' ayaa loo adeegsadaa si loo hagaajiyo cidhiidhiga hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Ilaaliyaha geeska hal abuurka ah ee daaqada daaqada ayaa bixiya kaliya ma aha naqshad qurux badan laakiin sidoo kale siyaado ah badbaadada si looga fogaado geeska fiiqan. Taxane buuxa codsan geedi socodka duritaanka xabagta si loo gaaro xoog wadajir wadajir ah. Naqshadeynta tiirarka geeska cusub waxay kadhigeysaa geeska wadajirka ah mid amaan ah oo qurux badan.
Muuqaal laba-midab ah, oo macnaheedu yahay astaan ​​gudaha ah iyo astaan ​​dibadeed oo midabbo kala duwan leh, waxay si fiican ugu habboonaan karaan naqshadda gudaha iyo aragtida dhismaha dibedda. Qodobka qufulka u adkeysiga u adkeysiga iyo ilaaliyaha ayaa bixiya badbaado dheeri ah waxayna xoojiyaan waxqabadka iska caabinta culeyska dabaysha ee cufnaanta hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Gacan-ku-hayn aan sal lahayn ayaa bixisa khibrad nololeed oo raaxo leh oo leh muuqaal yar, khadad naqshad siman, iyo hawlgal xasilloon. Isticmaalayaasha waxay ku kalsoonaan karaan amniga daaqada xitaa jawiga aadka u xun ee leh qalabka aaminka ah ee lagu guuldaraysto. Fiilooyin la xoojiyay oo wadajir ah oo la xoojiyay ayaa ka dhigaya daaqadaha xasiloon, adkeysi leh oo ammaan ah.
Daaqadda soo jiidaya + Soo jiidaya flynet
Daaqadda dibedda + Soo jiidka duulista
Nadiifinta kuleylka ah ee heer sare leh oo leh faahfaahinta kuleylka kuleylka, xargaha birta balaaran ee badan, iyo muraayadaha qafiifka ah. Naqshadaynta qaabdhismeedka asalka ah, kanaalka dheecaanka lagu dhisay, cidhiidhiga biyaha. Cidhiidhiga biyaha iyo iska caabbinta dabaysha ayaa lagu hagaajiyaa mullion iyo xarig ku xiran molion. Multistep shaabadaysan oo saddex lakab ah iyo qaab dhismeedka dheecaanka qarsoon ee cidhiidhiga biyaha oo fiican.
Xayndaabka amniga ee furan, 45 ° isku xirnaanta dhalada isku dhafan
Xayawaanno isku dhafan oo loo yaqaan 'EPDM gasket' ayaa loo adeegsadaa si loo hagaajiyo cidhiidhiga hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Ilaaliyaha geeska hal abuurka ah ee daaqada daaqada ayaa bixiya kaliya ma aha naqshad qurux badan laakiin sidoo kale siyaado ah badbaadada si looga fogaado geeska fiiqan. Taxane buuxa ayaa lagu dabaqayaa cirbadaha cirbadaha geeska ah processto si loo gaaro xoog wadajir ah oo sarreeya. Naqshadeynta tiirarka geeska cusub waxay kadhigeysaa geeska wadajirka ah mid amaan ah oo qurux badan.
Muuqaal laba-midab ah, oo macnaheedu yahay muuqaal gudaha ah iyo muuqaal dibedda oo midabbo kala duwan leh, waxay si fiican ugu habboonaan karaan naqshadda gudaha iyo aragtida dhismaha dibedda. Qodobka qufulka u adkeysiga u adkeysiga iyo ilaaliyaha ayaa bixiya badbaado dheeri ah waxayna xoojiyaan waxqabadka iska caabinta culeyska dabaysha ee cufnaanta hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Gacan-ku-hayn aan sal lahayn ayaa bixisa khibrad nololeed oo raaxo leh oo leh muuqaal yar, khadad naqshad siman, iyo hawlgal xasilloon. Isticmaalayaasha waxay ku kalsoonaan karaan amniga daaqada xitaa jawiga aadka u xun ee leh qalabka aaminka ah ee lagu guuldaraysto. Fiilooyin la xoojiyay oo wadajir ah oo la xoojiyay ayaa ka dhigaya daaqadaha xasiloon, adkeysi leh oo ammaan ah.
MDPC120A daaqad laba jibbaar
Muuqaalka cajiibka ah waa aragtida ugu horeysa ee ay bixiso! Naqshadeynta qaabdhismeedka gaarka ah iyo shatiga, furitaanka laba jibaarista, duulimaadka qarsoon, jir iswaafajiyay iyo xarkaha, luuqadda naqshadeynta minimalist, talaabooyin badan oo lagu xirxiray, dheecaanno qarsoon, habka furitaanka shatiga ...... Kuwaas ka sokow, waad haysan doontaa.
Qaab dhismeedka iyo nashqadeynta, cabir aad u weyn, 5 shaabadood
Kuleylka kuleylka ee aadka u fiican oo leh astaanta nasashada kuleylka, xariijinta kala-goysyada kuleylka badan, iyo muraayadaha qafiifka ah. Qaab-dhismeedka hal-abuurka cusub iyo qaab dhismeedka kuusha dhalada oo ay weheliso xargo iyo jir ayaa siinaya aragti caato ah oo isku dheelitiran oo leh khadad qaabeysan oo siman 5 shaabadood oo leh shaashado isku dhafan oo loo yaqaan 'EPDM gaskets' ayaa si weyn kor ugu qaaday cidhiidhiga biyaha iyo cidhiidhiga hawada.
45 ° isku xirnaanta muraayad isku dhafan oo isku-dhafan, dheecaan qarsoon
Duubka iswaafajsan iyo qaabka leh 45 ° wadajirka geeska wuxuu siiyaa muuqaal quruxsan oo qurux badan. Mullion mullion wadajir xirmooyinka wax lagu xiro oo la qariyo.
Furitaan gudaha ah oo labalaab ah, tikniyoolajiyad dunta oo qarsoon, marawaxadda dunta oo kala bixi kara
Furitaanka gudaha ee laba-laabka ah
Faashad aan la arki karin
Habka furitaanka laba-geesoodka ah ayaa si aad ah loogu talinayaa in loo kaco dhisme sare oo loogu talagalay hawlgal nadiif ah iyo nadiifin. Mesh duullimaadka qarsoon wuxuu bixiyaa muuqaal yaab leh iyo iftiin dabiici ah oo aad u fiican.
Marawaxadaha dunta la qaadan karo
Qodobka qufulka u adkeysiga u adkeysiga iyo ilaaliyaha ayaa bixiya badbaado dheeri ah waxayna xoojiyaan waxqabadka iska caabinta culeyska dabaysha ee cufnaanta hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Gacan-ku-hayn aan sal lahayn ayaa bixisa khibrad nololeed oo raaxo leh oo leh muuqaal yar, khadad naqshad siman, iyo hawlgal xasilloon.
- Dammaanad 10-sano ah oo loogu talagalay qalabka, taas oo ah heerka ugu sareeya ee warshadaha.
- Qalabka sumadda Medo, sumadda Jarmalka qalabka iyo qalabka sumadda Mareykanka waa la heli karo
- Habab kala duwan oo wax looga qabto ayaa la heli karaa.
- Gacan-ku-hayn aan sal lahayn ayaa bixisa muuqaal yar.
- Adeegga Customization waa la soo dhaweynayaa.
Nidaamka qufulka amniga sare ee caddaynta Bulgary
- Imtixaanka wareegga Strick
AlI qalabkayagu wuxuu ka gudbay tijaabinta wareegga adag oo dhowr jeer ka sarreeya heerka warshadaha.
- Nidaamka qufulka ee Unqiue
Nidaamka qufulka ee Unqiue wuxuu bixiyaa badbaado dheeri ah.
- Daaweynta dusha sare leh
Iyada oo daaweyn dusha sare leh, xitaa iskudhaf gudaha ah ayaa muujinaya kan ugufiican xaga aragtida iyo ladagaalanka labadaba.
Geeska la ilaaliyo ee badbaadada carruurta
Naqshadeynta nidaamka patented
Waxay qaadataa 35.3mm kuleyliyaha kuleylka kuleylka badan xariijimo, 27A god iyo labalaab 12A galaas godan qaabeynta, kaas oo la kulmi kara kuleylka waxqabadka dahaarka aagga qabow daran iyadoo la hubinayo dahaadhka dhawaqa sare waxqabadka 36db.
Isticmaalka shaabadaha tallaabada badan ee kanaalka iyo qaabeynta qaabdhismeedka dheecaanka qarsoon oo la hubiyo wax soo saarka fiican.
MEDO daaqadaha iyo albaabada ugu yar - Dabeecadda Guriga Cusub
Nidaamyada MEDO Bixi aragti ballaadhan oo leh looxyo cidhiidhi ah iyo muraayad aad u weyn
Bandhigyo heer sare ah oo lagu gaarey isku-dhafka saxda ah ee muraayadaha, astaamaha, qalabka iyo goomayaasha ayaa ku siin kara jawi badbaado leh oo raaxo leh
Xiga: Nidaamka Laabista Bi